ဇော်ငြိမ်းအေး ( ဆေး - ၂ ): 2016
ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲရှိ အိပ်ပုပ်ကြီးနေသော ကာလနဂါးကြီးအား လှုပ်နှိုး ကြည့်ခြင်း
ပိုက်ဆံ မချမ်းသာချင်သူများ စိတ်ချမ်းသာရင်တော်ပြီဆိုသူများ ယောင်လို့တောင် မဖတ်ပါနှင့်
ရေးသူ - သိန်းထက်စိုး (ဆြာသိန်း)
ခုရက်ပိုင်း လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ameer Rosic ရဲ့ အပြောတွေကို သဘောတွေ့ မနောခွေ့ ဖြစ်နေတယ်။ သူရဲ့ ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ဘယ်လိုလှမ်းရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ထားတယ်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Sunday, December 25, 2016
My Blog, My Memo: ယူနီကုဒ်နဲ့ ဇော်ဂျီ ဘယ်ကစ
My Blog, My Memo: ယူနီကုဒ်နဲ့ ဇော်ဂျီ ဘယ်ကစ: ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဖောင့် မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှ ဘာသာစကား၊ သင်္ကေတအားလုံးကို စံသတ်မှတ်ပြီး စနစ်တကျ နေရာချထားပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတ...
Posted by Zaw Nyein Aye at Sunday, December 11, 2016
ဗန်းစကားတွေဟာ ဘယ်ဘာသာစကားမှာမဆို ရှိတတ်တဲ့ ခေတ်ပေါ်အသုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် အချို့အသုံးတွေက တဖြည်းဖြည်း မှေးမိန် ပျောက်ကွယ်သွားသလို အချို့အသစ်အသစ်တွေကလည်း အများအပြား ထပ်တိုးလာပါတယ်။
ဘာသာစကားကို အထူးဂရုစိုက်ချစ်မြတ်နိုးသူ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို ထိန်းသိမ်းလိုသူတွေကတော့ ဒီဗန်းစကားတွေဟာ မိခင်ဘာသာစကားကို ဖျက်လိုဖျက်စီးလုပ်တာရယ်လို့ ရှုံ့ချကြတယ်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Sunday, September 18, 2016
Labels: Language (ဘာသာစကား), Myanmar (Burma), Notes (မှတ်စု)
မလျော့သောဇွဲ၊ မယိုင်လဲသောစိတ်ဓါတ်၊ မြဲမြဲခိုင်သော ပန်းတိုင်
လူတွေက ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး မရရအောင် ကြိုးပမ်းလေ့ရှိတယ်။ မလုပ်ရင်လည်း သူများနောက်လိုက်၊ ခိုင်းဖက် စသဖြင့် နောက်မြီးဆွဲ တန်ဖိုးနည်းဘဝမှာ ကျန်နေရစ်မှာလေ။
မာရသွန်နဲ့ တူတဲ့ ဘဝခရီးကြမ်းရှည်မှာ ယိမ်းယိုင်ပြိုလဲသွားတာ၊ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို မရနိုင်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီး လက်လျော့ အရှုံးပေးပြီး ကစားပွဲထဲက ထွက်သွားတာတွေလည်း အများကြီး တွေ့ဖူးမှာပါ။ အဲဒီလို မဖြစ်ဖို့ လက်တွေ့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ပန်းတိုင်တွေချမှတ်ပြီး မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ အထောက်အကူပြုမယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေပါရစေ။ ခေါင်းစဉ်က ကျနော့်ဘာသာ စဉ်းစားမိသလို ပေးထားတာပါ။ ရေးသူက ကိုမင်းမြတ်မောင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရေးဟန်နဲ့ အဲဒီအချိန်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အနေအထားကို အနည်းငယ်မြင်ယောင်နိုင်ဖို့ မတည်းဖြတ်ဘဲ မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပုံကိုလည်း သူမျှဝေထားတဲ့ဆီကပဲ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Saturday, September 17, 2016
ရေးသူ - မောင်ခိုင်မာ (အထက်မင်းလှ)
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးဝယ် ရာသီဥတု အစွန်းရောက် ပြောင်းလဲမှု နှင့်အတူ မမျှော်မှန်းနိုင်သော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမို များပြား ပြင်းထန်ကာ ခံစားနေကြရပါသည်။ ဤသို့သော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အဓိက ပြဿနာများတွင် အိုဇုန်းလွှာ ပျက်စီးမှုသည်လည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Monday, September 12, 2016
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး (Be the Best Version of You)
သင်ဟာ ဘယ်လောက်တော်တော်၊ ဘယ်လောက်ထူးချွန်ထူးချွန် နောက်ထပ် "အိုင်းစတိုင်း"တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သင်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲလှလှ နောက်ထပ် "အင်ဂျလီနာဂျိုလီ"တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ "မောင်ဖြူ"ဆိုရင် "မောင်ဖြူ"တစ်ယောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့ ထူးချွန်လို့ရပါတယ်။
သင်ဟာ "မလှ"ဆိုရင် "မလှ"တစ်ယောက်ရဲ့ အလှပဆုံးအလှနဲ့ လှပလို့ရပါတယ်။
တစ်ခြားဘယ်သူ့ကိုမှ မတုပပါနဲ့။ သင့်ကိုယ်သင်ရဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ပါ။
မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်ကို အသုံးပြုရန် တွန့်ဆုတ်နေသူများ၊ စတင်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရာတွင် ခက်ခဲနေသူများ၊ အဆင်မပြေသူများအနေဖြင့် အ​ောက်ပါ စာမျက်နှာများကို လေ့လာကြည့်နိုင်သည်။
(ယခု အ​ောက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည့် လမ်းညွှန်များသည် "မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ" မှ ဆွဲယူဖော်ပြပေးထားခြင်းများ ဖြစ်သည်။)
ကိုဆန်းထွန်းရဲ့ လမ်းညွှန် -
Posted by Zaw Nyein Aye at Friday, July 22, 2016
ယူနီကုဒ်စနစ် သုံးစွဲသူတစ်ယောက်ဆိုတာ . . .
ယူနီကုဒ်စနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကိုတော့ နားမဆန့်အောင် ကြားဖူးပြီး၊ သိထားပြီး ဖြစ်မှာပေါ့။
ဒီတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ လူအများစုမှ ခွဲထွက်ပြီး အဲဒီစနစ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲသုံးတဲ့လူတစ်ယောက်အဖို့ရော?
ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးများ . . .
၁/ မိခင်ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးသူ၊ ထိန်းသိမ်းလိုသူ၊ ပြန့်ပွားလိုသူ တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း (Love, promote and conserve mother language)
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ စာပေကို မြတ်နိုးသူ၊
အနာဂါတ်မျိုးဆက်များ အလွယ်တကူ တူးဖော်ရှာဖွေ စားသုံးနိုင်ရန် စာပေအချက်အလက်များ ချန်ထားခဲ့လိုသူ၊
မြန်မာကို ကမ္ဘာနှင့် ရင်ဘောင်တန်း တွင်ကျယ်စေလိုသူ၊
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘာသာစကားများကိုလည်း လေးစားသူ၊ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းလိုသူ၊
ရေရှည်ကိုကြည့်၍ အနာဂါတ်ကို မျှော်တွေးတတ်သူ၊ အမြင်ကျယ်သူများသာ စံမှီသော မြန်မာစာစနစ်ကိုပဲ သုံးတော့မည်ဟု စိတ်ဒုန်းဒုန်းချ သုံးတတ်ကြသည်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Wednesday, July 06, 2016
ရေးသူ - အရှင်ပညာသီရိ
"သုဋ္ဌု ကိလေသေ ဟနတီတိ သံဃော = ကောင်းစွာ ကိလေသာတို့ကို သတ်တတ်သောကြောင့် သံဃာမည်၏။"
တနည်းအားဖြင့် " ဒိဋ္ဌိ သီလသာမညေန သံဟတောတိ သံဃော = အယူ သီလ ပေါင်းအပ်သောကြောင့်သံဃာမည်၏။"
Posted by Zaw Nyein Aye at Sunday, May 22, 2016
စကားပုံတွေ မသုံးတော့ဘဲ လိုရင်းပဲ တည့်တည့်ပြောရရင် ကလေးဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ပါပဲ။ အနာဂတ်က ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိဘူးလို့ ပြောတတ်ကြပေမဲ့ အဲဒီအနာဂတ်ကို ပုံဖော်ကြမယ့် ခုလက်ရှိကလေးတွေရဲ့ အနေအထားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ကိုလည်း အနည်းနဲ့အများ ခန့်မှန်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။ မှားယွင်းစွာ ပျိုးထောင်ခံထားရတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ရမဲ့အနာဂတ်ဟာ ရင်လေးစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွေးကင်းစအရွယ်ကစလို့ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝအထိ ကလေးကိုပြုစုပျိုးထောင်တဲ့နေရာမှာ သတိထားသင့်တာလေးတစ်ချို့ကို ရေးချင်ပါတယ်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Friday, May 13, 2016
ကိုယ့်ဗမာနိုင်ငံ အရှိန်ဖြင့် တိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက် လှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားချင်လို့ ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် ခေတ်နောက်ကျ ကျန်နေရစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း နောင်လာနောက်သားတွေ သိရတာပေါ့။
ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာစံစနစ်သတ်မှတ်အသုံးပြုရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တောင်းဆိုခြင်း
Posted by Zaw Nyein Aye at Wednesday, May 04, 2016
Labels: Politics (နိုင်ငံရေး), တိုးတက်ရေး
ခွင့်လွှတ်ခြင်း (နဲ့ အခြားတစ်ဖက်က လက်စားခ​ျေခြင်း) အက​ြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်လေးက ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ ညီပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကောင်းတစ်ခုမို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ရေးသူက ဒေါက်တာ ခင်မို့မို့ဇင် (https://www.facebook.com/kmmz.1987) ပါ။
Posted by Zaw Nyein Aye at Sunday, May 01, 2016
အရှင် ပညဇောတ (Ashin Pannajota) ရေးသားသော စာစုကို ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင် တင်ပြပါသည်။
တပို့တွဲလပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အလွန်ထူးမြတ်တဲ့ နေ့ပါ … ။
ဩဝါဒပါတိမောက်အခါတော်နေ့ လို့ အသိများတယ်။
(မှတ်သားရန် - ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမ ဩဝါဒါနှင့် ပညတ်တော်မူသော သိက္ခာပုဒ်များကို ပါတိမောက်ဟုခေါ်ပါသည်။ ပါတိမောက်တွင် ဩဝါဒပါတိမောက်နှင့် အာဏာပါတိမောက်ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဩဝါဒပါတိမောက်ကို ဘုရားရှင်တို့သာ ပြခွင့်ရှိသည်၊ တပည့်သာဝကတို့ ပြခွင့်မရှိပါ။ သက်တမ်းရှည်သော ဘုရားတို့မှာ သြဝါဒပါတိမောက်ကို သာသနာခေတ်ဆုံးတိုင် ပြတော်မူကြသည်။ သက်တမ်းတိုသော ဘုရားရှင်တို့မှာ ပထမဗောဓိ ခေါ်သော ဝါတော် ၂၀ အတွင်း၌သာ ဩဝါဒ ပါတိမောက်ကို ပြတော်မူလေ့ရှိပါသည်။ သိက္ခာပုဒ်တော် ပညတ်ချိန်မှစ၍ ဩဝါဒ ပါတိမောက်ကို ပြတော်မမူဘဲ အာဏာပါတိမောက်ကိုသာ ပြစေတော်မူပါသည်။)
သြဝါဒပါတိမောက္ခ - မှာ ပါတဲ့ "ပါတိ"ဆိုတာက ကျဆုံးခြင်း ကျရှုံးခြင်း၊ "မောက္ခ"ကလွတ်မြောက်တာ … ။
မြတ်ဗုဒ္ဓက ကျဆုံးခြင်း ကျရှုံးခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေဖို့၊ အောက်တန်းကျ နောက်တန်းကျခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေဖို့ ဒီသြဝါဒကို ပေးခဲ့တာ။
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီသြဝါဒကို "သြဝါဒပါတိမောက္ခ" … လို့ ခေါ်တာ ။
Posted by Zaw Nyein Aye at Saturday, February 27, 2016
Labels: Religion (ဘာသာရေး), ထူးခြားသောနေ့ရက်များ, သုတစာပေ
တစ်ခါတုန်းက ရွာမှာ မိုးခေါင်နေတဲ့ အတွက် ရွာသားတွေအားလုံးစုပြီး မိုးရွာအောင် ဆုတောင်းပွဲလုပ်ဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ အဲဒီနေ့ရောက်တဲ့ အခါ ဆုတောင်းပွဲ လုပ်တဲ့နေရာကို ကောင်လေးတစ်ယောက်ကပဲ ထီးတစ်လက်နဲ့ ရောက်လာတယ်။
ဒါဟာ (သူ့ရဲ့) ယုံကြည်ကိုးစားမှု (faith) ပေါ့ . . . ။
Posted by Zaw Nyein Aye at Wednesday, February 17, 2016
၁ ဒီဂရီ ပဲ လိုပါတယ်
ရေးသူ - ဖြိုးကိုကိုနိုင် (ကိုနိုင်)
နယ်ကမိတ်ဆွေတစ်ယောက် သူများငွေတွေကို အတိုးနဲ့ယူပြီး စီးပွားရေးလုပ်တယ်။
လုပ်ငန်း အောက်သက် မကြေတော့ အလှမ်းကျယ် အလယ်လပ်ပြီး အခက်အခဲတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
ဒီတော့ အကူအညီ လာတောင်းတယ်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Tuesday, February 02, 2016